NBA Ndị mmeri meriri Ndepụta - cheapinternetsecuritysoftware.com
NBA Ndị mmeri meriri Ndepụta
Egwuregwu National Basketball Association (NBA) bụ otu n’ime ihe nchụso kachasị anya na egwuregwu US. Iri na itoolu dị iche iche franchise merie ọ dịkarịa ala otu aha na ìgwè atọ – Lakers, Warriors and 76ers – emeela otú ahụ na-egwu maka obodo dị iche iche.
Naanị ìgwè ise – Celtics, Lakers, Bulls, Spurs na Warriors – emeriwo karịa atọ mmeri na mkpokọta na n’etiti ha na-atụle ihe fọrọ nke nta ka ọ bụrụ 70 pasent nke aha.
Enweela ụfọdụ ndị mmeri na-atụghị anya n’okporo ụzọ n’agbanyeghị na Pistons na-ewere aha na 2004, ebe ndị Mavericks kụrụ ‘nnukwu atọ’ na 2011.
Ndị Cavaliers nwere ike nwee nnukwu LeBron James mana na 2016 ha ghọrọ ndị otu izizi iji merie mkparị 3-1, wee jiri otu ọnụ ọgụgụ merie ndị otu kachasị mma – ndị dike – na usoro ahụ.
Oge ohuru NBA malitere na Disemba 22 2020 wee rue Julaị 2021. You nwere ike inwe nzọ na egwuregwu mmeghe NBA ọ bụla ebe a. Na Grosvenor Casino, anyị anaghị akwado NBA nzọ. Anyị na-emeghe ụzọ maka ọtụtụ ịkụ nzọ egwuregwu n’ịntanetị, site na Grand Nationals for Horsing Racing and Premier League for Football Betting.
Nke a bụ usoro ndu anyị zuru oke maka ihe niile ịchọrọ ịma gbasara NBA.
Ndepụta nke NBA Champions kemgbe 1947 ruo 2019
Year Winning team Coach Results Losing team Coach 2020 Los Angeles Lakers Frank Vogel 4-2 Miami Heat Erik Spoelstra 2019 Toronto Raptors Nick Nọọsụ 4-2 Golden State Warriors Steve Kerr 2018 Golden State Warriors Steve Kerr 4-0 Cleveland Cavaliers Tyronn Lue 2017 Golden State Ndị dike Steve Kerr 4-1 Cleveland Cavaliers Tyronn Lue 2016 Cleveland Cavaliers Tyronn Lue 4-3 Golden State Ndị dike Steve Kerr 2015 Golden State Warriors Steve Kerr 4-2 Cleveland Cavaliers David Blatt 2014 San Antonio Spurs Gregg Popovich 4-1 Miami Miami Heat Erik Spoelstra 2013 Miami Heat Erik Spoelstra 4-3 San Antonio Spurs Gregg Popovich 2012 Miami Heat Erik Spoelstra 4-1 Oklahoma City Thunder Scott Brooks Dallas Mavericks Rick Carlisle 4-2 Miami Okpomọkụ Erik Spoelstra 2010 Los Angeles Lakers Phil Jackson 4-3 Boston Celtics Doc Osimiri 2009 Los Angeles Lakers Phil Jackson 4-1 Orlando Ime Anwansi Stan Van Gundy 2008 Boston Celtics Doc Osimiri 4-2 Los Angeles Lakers Phil Jackson 2007 San Antonio Spurs Gregg Popovich 4-0 Clev eland Cavaliers Mike Brown 2006 Miami Heat Pat Riley 4-2 Dallas Mavericks Avery Johnson 2005 San Antonio Spurs Gregg Popovich 4-3 Detroit Pistons Larry Brown 2004 Detroit Pistons Larry Brown 4-1 Los Angeles Lakers Phil Jackson 2003 San Antonio Spurs Gregg Popovich 4–4. 2 New Jersey ụgbụ Byron Scott 2002 Los Angeles Lakers Phil Jackson 4-0 New Jersey Nets Byron Scott 2001 Los Angeles Lakers Phil Jackson 4-1 Philadelphia 76ers Larry Brown 2000 Los Angeles Lakers Phil Jackson 4-2 Indiana Pacers Larry Bird 1999 San Antonio Spurs Gregg Popovich 4-1 New York Knicks Jeff Van Gundy 1998 Chicago Bulls Phil Jackson 4-2 Utah Jazz Jerry Sloan 1997 Chicago Bulls Phil Jackson 4-2 Utah Jazz Jerry Sloan 1996 Chicago Bulls Phil Jackson 4-2 Seattle SuperSonics George Karl 1995 Houston Rockets Rudy Tomjanovich 4-0 Orlando Magic Brian Hill 1994 Houston Rockets Rudy Tomjanovich 4–3 New York Knicks Pat Riley 1993 Chicago Bulls Phil Jackson 4-2 Phoenix Suns Paul Westphal 1992 Chicago Bulls Phil Jackson 4-2 Port ala Trail Blazers Rick Adelman 1991 Chicago Bulls Phil Jackson 4-1 Los Angeles Lakers Mike Dunleavy 1990 Detroit Pistons Chuck Daly 4-1 Portland Trail Blazers Rick Adelman 1989 Detroit Pistons Chuck Daly 4-0 Los Angeles Lakers Pat Riley 1988 Los Angeles Lakers Pat Riley 4–3 Detroit Pistons Chuck Daly 1987 Los Angeles Lakers Pat Riley 4-2 Boston Celtics KC Jones 1986 Boston Celtics KC Jones 4-2 Houston Rockets Bill Fitch 1985 Los Angeles Lakers Pat Riley 4-2 Boston Celtics KC Jones 1984 Boston Celtics KC Jones 4–3 Los Angeles Lakers Pat Riley 1983 Philadelphia 76ers Billy Cunningham 4–0 Los Angeles Lakers Pat Riley 1982 Los Angeles Lakers Pat Riley 4–2 Philadelphia 76ers Billy Cunningham 1981 Boston Celtics Bill Fitch 4-2 Houston Rockets Del Harris 1980 Los Angeles Lakers Paul Westhead 4-2 Philadelphia 76ers Billy Cunningham 1979 Seattle SuperSonics Lenny Wilkens 4-1 Washington Bullets Dick Motta 1978 Washington Bullets Dick Motta 4–3 Seattle SuperSonics Lenny Wilkens 1977 Portland Tra il Blazers Jack Ramsay 4-2 Philadelphia 76ers Gene Shue 1976 Boston Celtics Tom Heinsohn 4-2 Phoenix Suns John MacLeod 1975 Golden State Warriors Al Attles 4-0 Washington Bullets KC Jones 1974 Boston Celtics Tom Heinsohn 4-3 Milwaukee Bucks Larry Costello 1973 New York Knicks Red Holzman 4-1 Los Angeles Lakers Bill Sharman 1972 Los Angeles Lakers Bill Sharman 4-1 New York Knicks Red Holzman 1971 Milwaukee Bucks Larry Costello 4-0 Baltimore Bullets Gene Shue 1970 New York Knicks Red Holzman 4-3 Los Angeles Lakers Joe Mullaney 1969 Boston Celtics Bill Russell 4–3 Los Angeles Lakers Butch van Breda Kolff 1968 Boston Celtics Bill Russell 4–2 Los Angeles Lakers Butch van Breda Kolff 1967 Philadelphia 76ers Alex Hannum 4-2 San Francisco Warriors Bill Sharman 1966 Boston Celtics Red Auerbach 4–3 Los Angeles Lakers Fred Schaus 1965 Boston Celtics Red Auerbach 4-1 Los Angeles Lakers Fred Schaus 1964 Boston Celtics Red Auerbach 4-1 San Francisco Warriors Alex Hannum 1963 Boston Celtics Red Auerb ach 4–2 Los Angeles Lakers Fred Schaus 1962 Boston Celtics Red Auerbach 4–3 Los Angeles Lakers Fred Schaus 1961 Boston Celtics Red Auerbach 4-1 St. Louis Hawks Paul Seymour 1960 Boston Celtics Red Auerbach 4–3 St. Louis Hawks Ed Macauley 1959 Boston Celtics Red Auerbach 4-0 Minneapolis Lakers John Kundla 1958 St. Louis Hawks Alex Hannum 4–2 Boston Celtics Red Auerbach 1957 Boston Celtics Red Auerbach 4–3 St. Louis Hawks Alex Hannum 1956 Philadelphia Warriors George Senesky 4-1 Fort Wayne Pistons Charles Eckman 1955 Syracuse Nationals Al Cervi 4–3 Fort Wayne Pistons Charles Eckman 1954 Minneapolis Lakers John Kundla 4–3 Syracuse Nationals Al Cervi 1953 Minneapolis Lakers John Kundla 4-1 New York Knicks Joe Lapchick 1952 Minneapolis Lakers John Kundla 4–3 New York Knicks Joe Lapchick 1951 Rochester Royals Les Harrison 4-3 New York Knicks Joe Lapchick 1950 Minneapolis Lakers John Kundla 4-2 Syracuse Nationals Al Cervi 1949 Minneapolis Lakers John Kundla 4-2 Washington Capitols Red Auerbac h 1948 Baltimore Bullets Buddy Jeannette 4-2 Philadelphia Warriors Eddie Gottlieb 1947 Philadelphia Warriors Eddie Gottlieb 4-1 Chicago Stags Harold Olsen
Ndị otu NBA kachasị elu
Anyị ka nọ na NBA oge wee gwụ na Julaị 2021. Ka ị na-eche ndị mmeri dị mpako nke 2021 NBA, ị nwere ike chọọ ile ndị otu NBA kachasị elu anya. Lee ntuziaka anyị nye ha!
Ndị Ọchịchị Golden State
Ihe ị ga – eme bụ ileba anya na ndekọ ha n’ime afọ anọ gara aga iji hụ na ha bụ akụkụ ịkụ.
Ha abanyela na njedebe anọ gara aga wee merie atọ. Ha kwesiri ime ya mkpocha di ocha, mana ka ihe ntughari 3-1 gaa na LeBron James sitere n’ike mmụọ nsọ Cleveland Cavaliers, ọ na-esiri ike ịhụ na ha anaghị etinye aka na njedebe ọzọ n’oge a
Ha nwere ike ọ gaghị anọ n’ikpeazụ kemgbe 2010, mana ọ bụrụ na ị lelee akụkọ ihe mere eme ha na egwuregwu ahụ, o doro anya na ha bụ otu n’ime akụkụ NBA kachasị mma.
Otu okwu anwansị na 1960-70s hụrụ ka ha ruru 10 na mmechi ikpeazụ wee merie itoolu n’ime ndị ahụ, naanị otu mpịakọta na-abịa megide St Louis Hawks na 1958 maka akụkụ Red Auerbach.
Rockets anọwo na njedebe anọ, na-efunahụ ha abụọ mbụ na 1981 na 1986 tupu ha emeghachi ya azụ na mmeri na 1994 na 1995 n’okpuru nduzi nke Rudy Tomjanovich.
Ndị Lakers nwere nnukwu akụkọ ihe mere eme na NBA ma sonye na njedebe 31 dị egwu (W16, L15) mana eruteghị otu kemgbe ha meriri aha ahụ na 2010 – afọ 8 hiatus ma ha elebara anya iji lebara nke ahụ anya site n’ịgbakwunye ụfọdụ LeBron James na akwukwo ha maka oge ohuru.
Amara dị ka LA Lakers kemgbe 1958, ha meriri isi ise mbụ ha dị ka Minneapolis.
Kedu ndị otu NBA ka ọ bụ nnukwu ndozi?
Philadelphia 76ers enweela mmụba nke ukwuu n’afọ ndị na-adịbeghị anya, otu oge n’ihi oge ole na ole nke ‘tanking’ – na-ebute ajọ okwu njakịrị nke ‘Tụkwasị Usoro ahụ’.
Otu ndi nwere umuaka na-enwu enwu nke ndi mmadu na-achoputa ndi mmadu n’ime Joel Embiid, na ndi egwu egwuregwu Ben Simmons, ndi isii a na-atu egwu ugbu a n’egwuregwu a, o yiriri ka ha bu oke. mkpụrụ na Nzukọ Ọwụwa Anyanwụ ma ọ bụrụ na ha gwuo egwu maka ike ha.
Ndị egwuregwu bọọlụ NBA kachasị elu
Enweela ọtụtụ ndị egwuregwu dị egwu iji nye NBA amara ọtụtụ afọ ma wepụta ihe kacha mma na-esekarị okwu, mana n’okpuru bụ ụfọdụ n’ime aha ndị gara aga na ndị dị ugbu a.
Nwoke a achoghi iwebata ma mmetụta ya na egwuregwu ahụ adịwo ukwuu.
Ọ bụ onye mmeri NBA oge isii na nnukwu Chicago Bulls na ọ bulitere akara MVP na otu n’ime njedebe ndị ahụ, yana na-atụgharị NBA kacha baa uru Player na oge ise.
Ọ lara ezumike nká ruo afọ abụọ na-ekwu na enweghịzi ọchịchọ igwu egwuregwu ahụ, mana ọ laghachitere ma nwee ọganiihu na Bulls.
Mentla ezumike nká ọzọ yana ịkọ nkọ na Washington Wizards n’etiti 2001 na 2003, tupu ọ kwụgidere akpụkpọ ụkwụ ya maka ọdịmma na oge ahụ.
A na-elekarị ‘King’ James anya ka ọ bụrụ onye egwuregwu bọọlụ basketball kachasị mma n’ụwa, na ụfọdụ ndị, nke kachasị oge niile.
O buliela NBA Most Valuable Player Awards, onyinye NBA atọ MVP, akara ọla edo abụọ nke Olympic ka ịkpọ aha ole na ole n’ime nnukwu ọfụma ya ruo taa.
Oge mbụ ya na Cavalier wetara ụgwọ ọrụ ọ bụla na mgbakwunye na mmeri 4-0 ikpeazụ na 2007, mana enwere ọganiihu na Miami Heat, na-eduga ha na njedebe atọ na mmeri abụọ.
Shaq dị ka a maara ya nke ọma na-eguzo na 7ft 1 wee tụọ 150kg. Otu n’ime naanị ndị egwuregwu atọ iji merie NBA MVP, MVP niile na MVP niile n’otu afọ ahụ, o merikwara NBA Championship anọ wee mee ka ndị All-Star otu oge 15 na ọrụ ya niile.
Nke a bụ ihe nketa ya na NBA nke mere na Miami Heat na Los Angeles Lakers lara ezumike nká ya, wee kpọọ ya onye mmeri NBA ugboro abụọ.
Obi abụọ adịghị ya na otu n’ime aha kachasị na basketball nke oge a, Curry abanyelarị na NBA Finals ise, na-emeri atọ.
Ọ dịrị ndụ kwekọrọ na ndị dike hụrụ na ya, na-eme ya onye izizi nkebi Davidson College. Mgbe oge ole na ole chọtara ebe ọ nọ, Curry ga – enyere aka ịnye Onye Nlekọta mbu nke Golden State n’ihe karịrị afọ 40.
A na-ekwupụtakwa ya na ịkọwa egwuregwu ahụ site na isi ihe atọ dị egwu. Otu ìgwè karịa mgbe ọ bụla na-ewere ogo dị elu karịa site na anya ma nke ahụ fọrọ nke nta ka ọ bụrụ n’ihi Curry na ndị otu ya.
Kareem bụ onye ọkpụkpọ pụrụ iche maka ọtụtụ ihe kpatara ya. Ọ bụ onye ọkpụkpọ NBA mbụ na-egwu oge 20, na n’oge ahụ, ọ bụ MVP ugboro isii, NBA onye mmeri ugboro isii, ma ka na-edekwa ihe ndekọ maka ọtụtụ akara akara na mmeri ọrụ.
Akụkụ nke ihe nkiri ‘Showtime’ dị egwu, akara ụghalaahịa ya ‘Skyhook’ gbara ghọrọ ihe a ga-atụ egwu maka ndị na-emegide ya, n’ihi ọdịdị ya a na-apụghị igbochi egbochi.
Onye nche nke Greek mụrụ Milwaukee nwere oge ọrụ ya ruo ugbu a na 2019. O kekọtara ihe ndekọ maka ọtụtụ egwuregwu nwere ihe karịrị 25 isi, nkwụghachi azụ 15 na enyemaka ise, nke Shaquille O’Neal jibu.
Agbanyeghị na Bucks ga-efunahụ 4-2 na ndị mmeri Toronto Raptors na ngwụcha NBA, ‘Greek freak’ ga-abụ naanị onye ọkpụ ise nke amụrụ na mpụga US iji merie NBA MVP.
A na-ele anya na otu n’ime ndị na-agba ụta kachasị elu oge niile, Bird bụ naanị onye nọ na NBA akụkọ ihe mere eme ka akpọrọ Rookie of the Year, MVP, Finals MVP, All-Star MVP, Onye Nchịkwa nke Afọ na Executive nke Afọ.
Onyinye ya na basketball fọrọ nke nta ka ọ bụrụ nke na-enweghị atụ, ọ na-ebutekwa otu n’ime egwuregwu mbụ ‘Big Three’ nke meriri n’asọmpi atọ n’ime oge ise. Nnụnụ meriri akara MVP ugboro atọ, na ọbụna kpakpando na ihe nkiri Space Jam maka ezigbo ihe.
Bettinggba bọọlụ basketball gị ọ bụ slam dunk? Oge iji nwaa aka gị n’egwuregwu ndị ọzọ! Lelee ibe ịkụ nzọ egwuregwu anyị na Grosvenor Casinos.
Tags:meriri mmeri NBA Ndepụta ndị
Mgbasa ozi Fansbet Isiokwu a nwere obere oge inye. Naanị …